विश्वकै महँगा खेलाडी १९ वर्षीय एमबाप्पे, नेयमार पहिलो, रोनाल्डो चौंथो ! - विश्वकै महँगा खेलाडी १९ वर्षीय एमबाप्पे, नेयमार पहिलो, रोनाल्डो चौंथो !
विश्वकै महँगा खेलाडी १९ वर्षीय एमबाप्पे, नेयमार पहिलो, रोनाल्डो चौंथो !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ असार 148 Views
विश्वकपको चर्चासंगै खेलाडी किनवेचको चर्चा
विश्वको सबैभन्दा महँगा खेलाडीमा ब्राजिलका स्टार नेयमार, फ्रान्सका किलियन एमबाप्पे र ब्राजिलकै अर्का खेलाडी फिलिपे कौटिन्हो रहेका छन् । विश्वका दुई सर्वाधिक महँगा खेलाडी पेरिस सेन्ट जर्मनसँग रहेका छन् । विश्वको सबैभन्दा महँगो खेलाडी ब्राजिलका नेयमार हुन् । बार्सिलोनाका फरवार्ड नेयमारलाई अनुबन्ध गर्न सन् २०१७ को अगष्टमा फ्रान्सेली फुटबल क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) ले बार्सिलोनालाई २ सय मिलियन पाउन्ड तिरेको थियो ।
त्यस्तै विश्वका दोस्रोे महँगा खेलाडी हुन् १९ वर्षीय किलियन एमबाप्पे । एमबाप्पेका लागि पीएसजीले मोनाकोलाई १६६ मिलियन पाउन्ड तिर्दै गत वर्षकै जुलाईमा अनुबन्ध गरेपछि एमबाप्पे विश्वको दोस्रो महँगो खेलाडी बनेका थिए ।
त्यस्तै, स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाले लिभरपुलका ब्राजिलियन मिड्फिल्डर फिलिप्पे कौटिन्होलाई १४२ मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेपछि उनी ट्रान्सफर हुने खेलाडीमा विश्वका तेस्रो महँगा खेलाडी बनेका थिए ।
रियल मड्रिडका पूर्वफरवार्ड तथा पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डो मंगलबार ११२ मिलियन युरोमा इटालियन क्लब युभेन्टसमा आवद्ध भएसँगै उनी सर्वाधिक महंगा खेलाडीमा चौंथो भएका छन् । ३३ वर्षीय रोनाल्डो युभेन्टस गएसँगै सर्वाधिक रकममा अनुबन्ध हुने चौंथो खेलाडी बनेका हुन् ।
सन् २००९ मा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट कीर्तिमानी रकम ८० मिलियन पाउन्डमा रियलमा आवद्ध भएका थिए । रियलका लागि रोनाल्डोले ४५१ गोल गरिसकेका छन् । पाँच पटकको बालोन डी’ओर बिजेता रोनाल्डोले रियललाई पाँच पटक च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
रोनाल्डो विश्वको चौथो महँगो खेलाडी बन्नुका साथै क्लब कीर्तिमानी रकममा यूभेन्ट्स गएका हुन् । यसअघि यूभेन्टसले ७५।३ मिलियन पाउन्ड तिर्दै गोन्जालो हिगुइनलाई नेपोलीबाट २०१६ जुलाईमा भित्र्याएको थियो । एजेन्सी